Huawei P8 Lite ကို Android M တရားဝင်တင်နည်း | Androidsis
ငါမင်းကိုဆုံးမပြီးကတည်းကလအနည်းငယ်လောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် တရားဝင် Beta ကို အသုံးပြု၍ Huawei P8 Lite ကို Android M သို့အဆင့်မြှင့်ပါဒီနေ့အချိန်ရောက်လာပြီ ၎င်းကိုနောက်ဆုံးပေါ် Android 6.0 ဗားရှင်းသို့မဟုတ် Android M တရားဝင်သို့တရားဝင် update လုပ်ပါ.
ဒီပို့စ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ဒါမှမဟုတ်လက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာနဲ့တွဲထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာနည်းလမ်း ၂ ခုကိုငါပြတယ် တရားဝင် Android ဖုန်းသို့ Huawei P8 Lite ကိုအဆင့်မြှင့်တင် လွန်ခဲ့သောအချိန်ကတည်းက install လုပ်ရန်သင်ကြားပေးခဲ့သော beta version မှစတင်သည်။ တူညီတဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ကို Android M အတွက်တရားဝင်မွမ်းမံမှုအတွက်ရရှိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းနှစ်မျိုးကိုပြပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ရရှိနိုင်သည့် Android ဗားရှင်းအသစ်၏အသိပေးချက်ကိုကျော်ပြီးမည်သူမဆို OTA မှတဆင့်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအားဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်။ နောက်ဆုံးပေါ်အပြည့်အဝတရားဝင် firmware ကို။ ဖြည့်စွက်ကာ, ဤလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာသည် Huawei P8 Lite မော်ဒယ်များ၊ DualSIM မော်ဒယ်များသို့မဟုတ် ALE21 မော်ဒယ်များအားလုံးအတွက်မှန်ကန်သည်.
1 Huawei P8 Lite ကို Android M မှတရားဝင်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက်တွေ့ဆုံရန်လိုအပ်ချက်များ
2 Huawei P8 Lite ကို Android M သို့ကိုယ်တိုင် update လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ဖိုင်
3 လက်စွဲစာအုပ် update ကိုဗီဒီယိုမိနစ် 9:21
Huawei P8 Lite ကို Android M မှတရားဝင်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက်တွေ့ဆုံရန်လိုအပ်ချက်များ
OTA မှတစ်ဆင့်အဆင့်မြှင့်တင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ရရှိနိုင်သည့် Android ဗားရှင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအသိပေးချက်ကိုရရှိခြင်း မှလွဲ၍ မည်သည့်လိုအပ်ချက်ကိုမျှကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ OTA မှတဆင့်အသိပေးချက်ကိုလက်လွတ်မခံဘဲ Huawei P8 Lite ကိုတရားဝင် Android M သို့မွမ်းမံလိုသူမည်သူမဆိုအတွက် လက်ဖြင့်မွမ်းမံနည်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ခန်းစာကိုလိုက်နာလိုသူမည်သူမဆိုအောက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်ပါက -
တစ်ဦးရှိ Huawei P8 Lite DualSIM မော်ဒယ် ALE21 မော်ဒယ်.
အကယ်၍ သင်ကအဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တဲ့ tutorial မှတစ်ဆင့် Android M beta သို့အဆင့်မြှင့်ပါက၊ ဒီသင်ခန်းစာသင်ယနေ့သင်ပြသသည့်နည်းဖြင့်လည်း၎င်းကိုသင် OTA မှတစ်ဆင့်သင်အသိပေးချက်ကိုလွဲချော်သွားလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ လက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းသင်ရရှိနိုင်သည့် Android ဗားရှင်းအတွက်အထက်ပါဖော်ပြချက်ကိုလက်လွတ်မခံရလျှင်ဖြစ်စေ update လုပ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် Android M တွင်မရှိသေးသော်လည်းသင်၏စုစည်းမှုသည်အောက်ပါများထဲမှတစ်ခုနှင့်ကိုက်ညီပါကသင်၏ Huawei P8 Lite ကို Android M သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ဤသင်ခန်းစာကိုလည်းလိုက်နာနိုင်သည် - ALE-L21C432B524 - ALE-L21C432B194 - ALE-L21C432B188 - ALE-L21C432B170 - ALE-L21C432B010
OTA မှတဆင့်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်ပါက Wifi ကွန်ယက်သို့ဆက်သွယ်ပါ။
ကိုယ်တိုင်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်ပါက၊ စွမ်းဆောင်ရည်အနည်းဆုံး4Gb ၏ MicroSD ။
Huawei P8 Lite ကို Android M သို့ကိုယ်တိုင် update လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ဖိုင်
OTA အကြောင်းကြားစာကိုသင်မရရှိသေးပါကသင်လိုချင်သည့်အရာကိုလက်ဖြင့်မွမ်းမံလိုလျှင်၊ သင်ဤ ZIP ဖိုင်ကို download လုပ်ရပါလိမ့်မည်, unzip နှင့် dload ဖိုင်တွဲကို microSD မှတ်ဉာဏ်ကဒ်၏ပင်ရင်းထဲသို့ကူးယူပါ။
၎င်းနောက်သင်၏ Huawei P8 Lite ၏ Dialer ထဲသို့ ၀ င်ပြီးဤကုဒ်ကိုမှတ်သားပါ။
၀ န်ဆောင်မှုမီနူးကိုသင်ရလိမ့်မည် option ကိုနံပါတ်4ကိုရွေးပါ နှင့် OK ခလုတ်ကိုနှင့်အတူအတည်ပြုပါ။ ထိုအခါ terminal သည် AndroidSD သို့တရားဝင် update ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ MicroSD ၏ root ထဲရှိ dload folder အတွင်းတွင်ကူးယူပြီးပြန်ဖွင့်လာလိမ့်မည်။ Huawei P8 Lite ကို Android M ၏တရားဝင်အဆင့်မြှင့်တင်မှုစတင်မည်။
အဲဒီနောက်ငါဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျပြောရမယ် Huawei P8 Lite ကိုတရားဝင် Android M သို့ကိုယ်တိုင် Update လုပ်ပါ။ (မိ ၉း၂၁)
လက်စွဲစာအုပ် update ကိုဗီဒီယိုမိနစ် 9:21
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » လဲ tutorial » Huawei P8 Lite ကို Android M မှမည်ကဲ့သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်နည်း
Benny Teran mena ဟုသူကပြောသည်
ပြီးတော့ ALE-L23 မော်ဒယ်တွေကိုဘယ်လိုအဆင့်မြှင့်ထားသလဲ။
Benny Teran Mena အားပြန်ကြားပါ
Alfred VERASTEGUI ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တစ် ဦး တည်းသာအဆင့်မြှင့်ပါက၊ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာနှင့်မှအမြစ်မရှိဖြစ်သောပြATနာကျွန်ုပ်ရှိသည်။
ALFREDO VERASTEGUI သို့ပြန်သွားပါ
Juan တစ်ကိုယ်တော် ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မော်ဒယ် ALE-L23 လျှင်?
Juan Solo သို့ပြန်ပြောပါ
My.model သည် Ale L23 ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့အသစ်ပြုပြင်ရမည်နည်း။
Jose Botello ဟုသူကပြောသည်
ကြည့်ပါ၊ ငါ L21 အတွက်ဗားရှင်းဖြင့် update လုပ်ပါ၊ ထပ်တူလုပ်ပါ၊ မြင်ရပါလိမ့်မည်
Jose Botello ကိုပြန်ပြောပါ
Yury အလက်ဇန်းဒါး hernandez ဟုသူကပြောသည်
ငါသည်ဤဗားရှင်း ALE-L23C605B140 ရှိသည်
Yury Alexander Hernandez အားပြန်ပြောပါ
ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး p8lite Ale -23 အကူအညီကိုဘယ်လိုအဆင့်မြှင့်တင်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေအတွက်အဖြေမရသေးပါဘူး ကျေးဇူးပြု၍ Android 6.0 ဖြစ်
aguilera အဲရစ် ဟုသူကပြောသည်
ဒီမော်ဒယ်အတွက် Huawei P8 Lite firmware ALE-L23c605b140 android 6.0 နှင့် emui 4.0 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
erick aguilera အားပြန်ပြောပါ
ale-l23c636b150 ကို update လုပ်ရန်၊ မည်သည့်အဆင့်များကိုသင်လိုက်နာရမည်နည်း။
ငါ Huawei ကိုလံဘီယာ၏စာမျက်နှာအတွက် update ကိုမြင်ကြပြီရှင်းရှင်းလင်းလင်းထောက်ခံမှု downloads android 6.0 emui 4.1
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ ALE-L23C60B140 ကို update လုပ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ရေဒီယိုသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဆင်ပြေမှုရှိမရှိကြည့်ချင်သောသူများနှင့်အတူရှိနေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်ဆက်လက်နားထောင်နိုင်ရန်ပြန်လည်စတင်ရန်ဖြစ်သည်။ ... တစ်စုံတစ် ဦး ကဤအကြောင်းအချက်အလက်ရှိပါကသင်၏အစိတ်အပိုင်းတွင်အသေးစိတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ATTE George ပျော်ရွှင်သောနေ့
carlos bolaños izarra ဟုသူကပြောသည်
ငါ h အတွက် ale-l23 update ကိုမရှိသေးပါ, ငါတို့စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်နားလည်ပါသည်
carlos bolaños izarra အားပြန်ပြောပါ
L23 FOR UPDATE အားလုံးရရှိနိုင်လျှင်ငါသိလိုပါတယ်
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=1136288 ဒီတစ်ခုက ale23 ကို ale21 သွားဖို့တစ်ခုတည်းသောအရာပဲဆိုတာစစ်ဆေးပါ
ငါမက္ကစီကိုမှဖြစ်ပြီး, ငါပြproblemနာရှိခဲ့ကတည်းကငါ့ကိုမဆိုမေးခွန်းများကိုငါ့ကိုသိစေ, သူတို့ကသော့ဖွင့် bootloader ကိုသိနှင့်ပြီးသားအဲဒီမှာပထမ ဦး ဆုံးဖော်ပြထားသောဖိုင်များကို download လုပ်ပါနှင့်ခြေလှမ်းများအားဖြင့်ကွန်ပျူတာကနေဖိုင်ကိုကွပ်မျက်ခြင်းဖြင့် flash ကိုလုပ်။ ထိုပြည်၌သင်တို့သည်ဖြစ်လိမ့်မည် l21 ကို steep2 file ကို unzip လုပ်ပြီးနောက် l20 ဖိုင်တွဲမှ update.zip ပေါ်လာသည်အထိအလေးချိန်ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာ 21k သည် baloong နှင့် voila ကိုဖယ်ရှားခြင်းကြောင့်၎င်းသည် ALE-L21 ဖြစ်လာပြီး double sim function ကိုသက်ဝင်သည်။ sd slot သည် hand sim ကိုအသုံးပြုသည်။ L6 သည်အလှအပဖြစ်သည်။ သင် android XNUMX သို့သွားရန်ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များအတိုင်းသင်လုပ်နိုင်သည်။
tugal အားဖြင့် benjamin ဟုသူကပြောသည်
Jorge, သင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်တတ်နိုင်အနည်းငယ်အသေးစိတ်ဖြစ်နိုင်မည်နည်း ငါ့မှာ 23 tb ale ရှိတယ်။ ငါပီရူးကလာတယ်
tugal အတွက် benjamin အားပြန်ပြောပါ
ငါစုစည်းထားတာကိုမမှတ်မိပေမဲ့ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီးအဲဒါကိုအဆင့်မြှင့်လိုက်တယ်။ အခုတော့ ၆.၀ ပေါ့။ ဒါပေမယ့်ဗားရှင်းကဘက်ထရီပိုသုံးတယ်၊ ငါမကြာခင်မှာပဲငါ့မေးခွန်းကိုအသုံးချလိုက်ပြီဆိုတာကိုသူတို့ပြောတာကို balong ကပြောတယ်။ ငါ balong မှစပြီးဘယ်လိုတရားဝင်ဖြစ်လာသလဲငါ root မရှိဘူး။ botloader unlocked မရှိဘူး
ငါ zip steep2 ကိုဘယ်မှာ download ရမလဲ
ကျွန်ုပ်၏ L23 ကို ALE-L21C432B17 အဖြစ်ဖော်ပြပြီး android6၏ update ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဖုန်းသည်ကျွန်ုပ်အားအချက်ပြခြင်းမပြုပါ။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီနိုင်မှာလား
လော်ရာ ဂ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Huawei p6.0 lite ALE-L8 21 update နှင့်ပြaနာရှိပါသည်။ ၎င်းသည်စတင် update လုပ်ပြီး ၇% သို့ရောက်သောအခါ၎င်းသည်ပျက်ကွက်မှုရှိကြောင်းနှင့်၎င်းသည်ပြန်လည်စတင်သည်ကိုပြောပြသည်။ ငါ၌ရှိသောဗားရှင်း B7 ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသလော အဆိုပါလက်စွဲသည်နှင့်အညီပေမယ့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
Leticia R. ဟုသူကပြောသည်
မိုင်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်သည်။ လာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း၎င်းသည်မည်သို့ပြုမူသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်ရလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုမက္ကဆီကိုမှတယ်လီစကတ်ဖြင့်ဝယ်ယူလိုက်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည် ALE-L23 ဖြစ်သည်
Leticia R. သို့ပြန်သွားရန်
Carlos Garcia ဟုသူကပြောသည်
Leti, ဘယ် version ကိုအဆင့်မြှင့်လဲ။ နံပါတ်ကဘာလဲ ငါသည်လည်းမက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှဖြစ်ပြီး၊
Carlos Garcia သို့ပြန်သွားပါ
Norma Leticia Rivero Valentin ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဤဆောင်းပါးတွင်ပါသော link အတိုင်း B550 သို့ update လုပ်ပါ။ သို့သော်သင့်အား၎င်းကိုမွမ်းမံရန်ကျွန်ုပ်မအကြံပြုပါ။ နှစ်ရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemsနာများရှိပြီးမျက်နှာပြင်သည် (အနက်ရောင်) အေးခဲနေပါသည်။ ငါ Lollipop (B046 လို့ထင်တယ်) ကိုထပ်သွားပြန်ပါတယ်။ B170 ကိုအလိုအလျောက်အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်သော်လည်းဆဲလ်ကအတူတူပဲဖြစ်နေပါပြီ။ ကျွန်ုပ်ကို၎င်းကိုမကြာခဏပြန်လည်စတင်ရန် (သို့) မျက်နှာပြင်ပြိုကျခြင်းမှကာကွယ်ရန်ပုံရိပ်ပေးရန်ပြန်လာခြင်းမရှိတော့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် ငါကအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်။
Norma Leticia Rivero Valentin အားပြန်ပြောပါ
bj obando ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလားကျွန်ုပ်၌ Huawei ALE-L23 စုစည်းမှု ALE-L23C605B150 ရှိပြီးကျွန်ုပ်မွမ်းမံချက်မရရှိသေးပါ၊ တစ်စုံတစ် ဦး မှသတင်းအချက်အလက်ကိုသိရှိခြင်း
bj obando အားပြန်ပြောပါ
ငါ့မှာ Huawei p8 lite ရှိပေမယ့် model design ale-l23
Luver အောင်မြင်မှု ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းတစ်ခုမေးခွန်း p8 lite ALE21 ALE-L21C432B204 နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ် ???? ကျွန်ုပ်တွင်သံသယများရှိပါသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်စာရင်းထဲတွင်မပါရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုမပျက်စီးစေလိုပါ
Luver Achievement ကိုပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ALE-L21 C178B120 အတွက် update အသစ်ရှိသလား။
ဟိုင်းမာရီယာ၊ ငါ b120 ကိုသင်မွမ်းမံနိုင်မလား၊ ငါ botloader နဲ့မလုပ်နိုင်တာကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာသိချင်တယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး🙁
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် B508 firmwre ရှိသည်။ ဒုတိယ SIM ကိုဘယ်လိုဖွင့်ပြီး Huawei ရဲ့တရားဝင် version ကိုရနိုင်မလဲ။